Vanoda Kunyoresa Voshushikana neNyaya yeMagwaro Anoratidza Pavanogara
Amai Rita Makarau
Kusimudzirwa kwekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota kwatanga neChipiri munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vamwe vanhu muBulawayo vachichema-chema nemutemo wekuti vanonyoresa vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara.
Ongororo yaitwa neStudio7 yaratidza kuti vanhu vange vachinyoresa panzvimbo dzakasiyana siyana dzekunyoresa muguta reBulawayo pasina zvimhingamupinyi zvakawanda.
Mumwe weavo vanyoresa, Amai Nyarai Gwari, vaudza Studio7 kuti vakwanisa kuita izvi munguva pfupi sezvo vange vane zvose zvanga zvichidiwa.
Asi vamwe vanhu vakawanda vange vachida kunyoresa vange vachitadza kuita izvi nekuti vange vasina magwaro anodiwa anoratidza kuti vanogara kupi kana matsamba anopa huchapupu hwepavanogara, kana kuti ‘proof of residence’.
Mumwe aenda kunonyoresa ndiAmai Gwari avo vati vaona vanhu vakawanda vachitadza kunyoresa nekuda kwedambudziko iri.
VaRonald Mubhemi vanoti vari kunyunyutawo pamusoro pemutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro epavanogara vachiti kuve nechitupa chinoratidza kuti uri chizvarwa chemuZimbabwe ndizvo chete zvinofanirwa kudiwa.
Mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara unoitirwa kuti veZimbabwe Electoral Commission vagokwanisa kunyoresa vanhu papolling station iri pedyo nepavanogara sezvo musarudzo dzinouya vanhu vanenge vachivhotera papolling station yavakanyoresa.
Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti James ati haawone chinonetsa vanhu pamutemo wekuti vave nemagwaro anoratidza pavanogara achiti izvi zvinhu zvinogara zvichiitika kana munhu uchivhura account kubhangi.
Ati kunyange hazvo achiroja, akwanisa kuwana gwaro rinoratidza kuti anogara papi zviri nyore uye akwanisawo kunyoresa zvisina dambudziko.
Izvi zvatsigirwawo naVaBrian Ngundu anonyoresawo.
Mumwe wechidiki, Jonathan Nkomo, uyo ati anyoresa kuti agokwanisa kuvhota kekutanga muhupenyu ati afarawo kuti akwanisa kuita izvi uye ari kutarisira kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa16 Gumuguru.
Kuchaitwa zvimwe zvikamu zvitatu munyika mose uye chikamu chinotevera chinotanga pakupera kwemwedzi uno.
Pari zvino muBulawayo mune nzvimbo dzinopfuura zana pari kunyoreswa vanhu.